Raw Tamoxifen Citrate vovo-panamboarana mpanamboatra & mpamatsy - orinasa
Rano Tamoxifen Rota Tazoxifen (54965-24-1)
Novambra 8, 2018
Tamoxifen Citrate poèta dia mpitsabo tsy misy fanavakavahana manana toetra manohitra ny fiarovana. Anti-estrogens miasa amin'ny fanakanana ny vokatry ny estrogen hormonina ao amin'ny vatana. Estrogen dia mety hitarika ny fitomboan'ny karazam-borona sasany. Ny tazoxifen dia mety manakana ny fivoaran'ny tsoka izay mihetsika amin'ny estrogen.
Rano Tamoxifen Citrate Rao (54965-24-1) video
Rano Tamoxifen Citrate Rao (54965-24-1) Description
Ny siramamy siramamy vita amin'ny Tamoxifen dia ny siran-tsiran-tsain'ny môtônôkrôgônan'ny tsindrin-tsiran-tany (SERM). Ny Tamoxifen dia manakana ny fifandraisana amin'ny estradiol amin'ny estrogen receptors, ka manakana ny mpitsabo tsy hiantehitra amin'ny ADN amin'ny valan'aretina. Ny vokatra dia ny fihenan'ny ADN sy ny valin'ny sela ho an'ny estrogen. Ankoatr'izay, tamoxifen up-regulates the production of the transformation factor B (TGFb), a factor that impedes growth of cell growth, and down-regulates insulin-like growth factor 1 (IGF-1), a factor that stimulates cell growth cell growth . Ny tamoxifen koa dia mampihena ny fomba fitenin'ny proteinina kininina C (PKC) amin'ny endriny mifandraika amin'ny doka, manakana ny fampidirana ny signal ary mamokatra ny fiantraikany amin'ny tumors toy ny glioma malemy ary ireo kanseran'ny hafa izay manandratra ny PKC.
Ny tsiranoka vita amin'ny Tamoxifen Raw dia ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny voan'ny kanseran'ny nono estrogen. Ny tamoxifen dia mihetsika toy ny anti-estrogen (mason-tsindrona) ao amin'ny vatan'ny mammary, fa toy ny estrogen (mpihetsika manaitaitra) amin'ny metabolismol cholesterol, ny dity ny taolana, ary ny fihanaky ny sela amin'ny endometrioma.
Rano Tamoxifen Rota Tazoxifen (54965-24-1) Specifications
Product Name Rano Tamoxifen Citrate
Anarana simika Istubal; Tamoxifen,
Brand Name Nolvadex
Drug Class (nitranga in-1)
molekiolan'ny Formula C32H37NO8
molekiolan'ny Wvalo 563.647 g / mol
Monoisotopic Mass 563.252 g / mol
mitsonika Point 97 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Ny fihenan'ny tamoxifen plasma dia mifototra amin'ny elanelana amin'ny antsasaky ny androm-piainan'ny 5 hatramin'ny andro 7. Ny antsasaky ny vanim-potoan'ny N-desmethyl tamoxifen dia andro 14.
Color Vovoka mena na tsy fotsy
Solubility rano XLXX mg / ml amin'ny 0.000167 ° C
Application ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny voan'ny kanseran'ny nono.
Inona ny Raozy Tamoxifen poids citrate (54965-24-1)?
Tamoxifen dia karazana fitsaboana hormone fantatra amin'ny hoe modulator mpanome safidy estrogen (SERM). Ny iray amin'ireo anarana famantarana ho tamoxifen dia ny Nolvadex.
Ahoana ny siramamy vita amin'ny tazoxifen Rao (54965-24-1) asa
Ny Tamoxifen dia miasa amin'ny fifehezana ireo mpikatroka estrogen ao amin'ny tranon-jaza ka tsy afaka mifatotra aminy ny estrogen. Amin'ny fampihenana ny estrogen ao amin'ny tratra mifatotra amin'ny receptor, tamoxifen dia mampihena ny fitomboana sy famokarana sela estrogen-fahatsiarovan-tena.
Ny siramamy siramamy Tamoxifen dia ny siratan'ny siranan'ny modulator mpanangona estrogen antineoplast (SERM). Ny Tamoxifen dia manakana ny fifandraisana amin'ny estradiol amin'ny estrogen receptors, ka manakana ny mpitsabo tsy hiantehitra amin'ny ADN amin'ny valan'aretina. Ny vokatra dia ny fihenan'ny ADN sy ny valin'ny sela ho an'ny estrogen. Ankoatr'izay, tamoxifen up-regulates the production of the transformation factor B (TGFb), a factor that impedes growth of cell growth, and down-regulates insulin-like growth factor 1 (IGF-1), a factor that stimulates cell growth cell growth . Ny tamoxifen koa dia mampihena ny fomba fitenin'ny proteinina kininina C (PKC) amin'ny endriny tsy miankina, manakana ny fiverimberenan'ny signal ary mamokatra ny fiantraikany amin'ny tumors toy ny glioma malemy sy ireo kanseran'ny hafa izay manandratra ny PKC.
Rano Tamoxifen Citrate Rao (54965-24-1) Dosage
Vakio ny torolàlana momba ny fanafody omen'ny mpitsabo anao alohan'ny hanombohanao mampiasa tamoxifen ary isaky ny mangataka refy ianao. Raha manana fanontaniana ianao dia miresaha amin'ny dokotera na pharmacista anao.
Raiso ity fanafody ity amin'ny vava na tsy misy sakafo, indraindray indray mandeha na indroa isan'andro ho an'ny 5 taona, na arak'ilay dokotera anao. Ny dosage isan'andro mihoatra ny 20 milligrams dia matetika no mizara antsasak'adiny ary nalaina indroa isan'andro, ny maraina sy ny hariva, na ny torolalan'ny dokotera. Raha mampiasa ny ranom-boasary ianao dia alamino tsara ny dosage amin'ny fampiasana fitaovana fandrefesana manokana / sotro. Aza mampiasa sotro ao an-trano, satria mety tsy hahazo ny doka mety ianao.
Ny dose dia mifototra amin'ny toe-pahasalamanao sy ny valin'ny fitsaboana.
Rano Tamoxifen Rota Tazoxifen (54965-24-1) soa
Ny Tamoxifen no safidy voalohany ho an'ny vehivavy premenopausal ary mbola safidy tsara ho an'ny vehivavy menavava izay tsy afaka mandray fofona aromatase.
Tamoxifen dia afaka:
Mampihena ny mety ho voan'ny kanseran'ny nono avy amin'ny 40% ho 50% ao amin'ny vehivavy menavava ary amin'ny 30% ho 50% amin'ny vehivavy premenopausal
Ampiheno ny mety ho voan'ny homamiadan'ny zaza vao mifindra amin'ny rongony hafa amin'ny manodidina ny 50%
Mitotongana ireo kanseran'ny tazomoka lehibe, hormone-receptor-tsaratsara alohan'ny fandidiana
Mahasalama na manakana ny fitomboana na hivoatra (metastatic) hormone-receptor-positive kanseran'ny nono na eo amin'ny vehivavy mialoha sy an-jatony
Ny kanseran'ny nono any amin'ny kanseran'ny nono dia misy fiantraikany amin'ny aretina fa tsy voamarina
Ny Tamoxifen dia manome tombony ara-pahasalamana hafa izay tsy mifandraika amin'ny fihinanana homamiadana. Satria SERM izy io, dia mifantoka na mametaka ny hetsika avy amin'ny estrogen amin'ny sela voafaritra. Ny tamoxifen dia manaparitaka ny asan'ny estrogen amin'ny sela misy ny tazomoka, manasitrana ny asan'ny estrogen amin'ny taolana sy ny sela. Ny tamoxifen dia:
Ampio ny fatiantoka taolana taorian'ny taona
ambany cholesterol ambany
Mividiana vovoka Citrate Tamoxifen avy amin'ny Buyaas.com
Miaraha miasa aminay, afaka ataontsika farafaharatsiny:
1. Ny vokatray dia atolotra eo ambany cGMP ary azo hatsaraina ny kalita.
2. Ny fahadiovana dia miantoka tsy latsaky ny 98%. mpianatra amin'ny fitantanana morontsiraka; HPLC; Azo atao ny tatitra momba ny tatitra HNMR.
3. Ny fahafahantsika manome fahafaham-po dia tena miorina tsara ary mamolavola tsy tapaka ny famokarana betsaka
4. Manana traikefa manan-karena isika amin'ny fanabeazana tsena ambony eran-tany.
5. Miaraha miasa amin'ny orinasanay mivantana, azonao atao ny mampihena ny vidinao.
Ny toro-làlana farany ho an'ny Nolvadex mba hanasitranana ny homamiadana
Tamoxifen: Ankoatry ny Antiestrogen, nataon'i John A. Kellen, pejy 1-201
John F. Kessler, Greg A. Annussek, HarperCollins, 6 Aprily 1999, 1-208
Tamoxifen, Dr. Titus Marcus, nahazoana alalana, 29thMarch 2019, 1-18
Ny Clomiphene Citrate (Clomid) roam-pototra (50-41-9)
Rano anastrozole roah (120511-73-1)
Rojo Letrozole roah (112809-51-5)
Vovon-tsavona roapolo (107868-30-4)